I-Holandiesi Holiday House .. ipholile kwindalo. - I-Airbnb
I-Holandiesi Holiday House .. ipholile kwindalo.
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguInguna
Indlu yethu yeholide yenziwa ngesitayile somthonyama saseNorway kwaye ibekwe ngemithetho yeMeridian yomhlaba ngoko ukulala kuyathandeka kakhulu. Le ndlu iphakathi kwendalo kunye namahlathi ajikelezileyo. Ulwandle lukwiimitha eziyi-800 (iGulf of Riga). Idolophana ekufutshane imalunga neekhilomitha eziyi-4. Yiba nexesha lokuphumla kwindalo ngoko le yindawo efanelekileyo. Isikhululo seenqwelo-moya (RIX) malunga neekhilomitha eziyi-60 nayo ikomkhulu i-op Latvia RIGA imalunga ne-70 km. I-sauna kunye neJacuzie ziyafumaneka kwiindleko ezongezelelweyo.
Le ndlu inendawo yokuhlala enesofa yabantu abayi-2 (180x200) nekhitshi negumbi lokuhlambela elinento yonke (kuquka Umatshini wokuhlamba) . Kukho iWifi yasimahla. Kumgangatho wesibini kukho ibhedi elala abantu ababini enye nebhedi elala umntu omnye. I-Netflix TV kunye neNetflix kunye neYouTube. Indawo yokudlala yabantwana enebhokisi yesanti kunye neGarden House iintsuku ezinezimvula. Imidlalo iyafumaneka (Novus, ibhola njl.)
Ngemali eyongezelelweyo kukho iJacuzie kunye neSauna efumanekayo.
I-Barbeque isetiwe simahla, ukupaka simahla neWiFi yasimahla.
Akukho bamelwane okanye izakhiwo (kufuphi). Indawo yayo yendalo. Kodwa yazi : nayo ayikho i-Disco. Ufuna ukuphumla kwihlabathi elixakekileyo? Nantso ke.
Umbuki zindwendwe ngu- Inguna
Sihlala esakhiweni ngoko akukho mfuneko yokufumana isitshixo kwenye indawo :-) ibe sisoloko sikhona xa sinemibuzo okanye sicebisa.
Iilwimi: Nederlands, English, Français, Deutsch, Українська